Isifo se-Aquarium entsha | Ngeentlanzi
Rhoqo kwenzeka ukuba uthathe isigqibo sokubeka i-aquarium ukuqala ngokupheleleyo kwaye kubonakala ikwimeko egqibeleleyo, kodwa emva kweentsuku ezimbalwa uqaphele ukuba ziyafa iintlanzi. Eli linegama kuba oko kwenzeka rhoqo, kubizwa ngokuba yi 'isifo se-aquarium esitshaKuqheleke kakhulu kwiindawo ezinamanzi amatsha kwaye ukuze kungenzeki, kufuneka kuthintelwe ngokulandela izikhokelo ezithile.
Isiphoso okanye unobangela, yithi, kuku Ityhefu yeammonia. Iintlanzi zivelisa i-ammonia kwinkunkuma yazo, eqhutywa yintsholongwane kwaye iguqulwe ibe yi-nitrite. Inkqubo ye- i-nitrite kunye ne-ammonia ziyingozi kakhulu ekulobeni kwizixa ezincinci. I-aquarium entsha ayinayo le ntsholongwane ibalulekileyo, ngenxa yoko i-ammonia iyaqokelela, ekugqibeleni ityhefe iintlanzi zife.
Isisombululo, qala umjikelo kwi-aquarium. Nje ukuba ifakwe kwi-aquarium, kufuneka ibonelelwe ngeentlanzi ezincinci nezinganyangekiyo ukuqala inkqubo, inokuba njalo coca amanzi ngemveliso yenzelwe ukuqala umjikelo kwi-aquarium. Kungcono ukwazisa iintlanzi ezimbalwa kodwa ezinganyangekiyo ukuthintela isifo se-aquarium esitsha. Oku kuya kusebenza njengonikezelo lwe-ammonia kwiikoloni zebacteria.
Kuyimfuneko ukuba ukwaziswa kwentlanzi ngokuthe ngcembe. Ungaze ngaphezulu kwentlanzi enye okanye ezimbini ngeveki. Ke i iikholoni zebhaktiriya ekhoyo kwitanki iya kukhula kwaye ihlengahlengise ukumelana nexabiso elonyukayo le-ammonia efakwe etankini. Kubalulekile ukuba i-aquarium icocekile kwaye i-nitrate iyahlaziywa, koku kufuneka utshintshe phakathi kwe-10 kunye ne-20% yamanzi ngeveki. Xa ucoca isihluzo, musa ukukwenza ngamanzi etephu okanye iimveliso ezinjengesepha, njengoko oku kunokwenzeka bulala ibhaktheriya kwaye iya kuqala umjikelo kwakhona, hlala uyicoca ngamanzi e-aquarium.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Isifo esitsha se-aquarium